Iyo yazvino beta yeSteamOS Linux inosvika neMesa 18.1.6 uye Nvidia 396.54 | Linux Vakapindwa muropa
Valve yakaburitsa a nyowani beta vhezheni yeSteamOS yako sisitimu inoshanda (Debian-based) pane yeruzhinji yekuyedza chiteshi uye, sekuvimbiswa, inogadziridza iwo magiraidhi masutu.
Valve payakavandudza kuburitswa kwayo kune yazvino vhezheni yakagadzika yeSteamOS pakupera kwaChikunguru, yakataura kuti iyo yekuvandudza yaizove diki kuitira kuyedza mvura isati yagadzira hombe kuvandudza kune kernel uye grafiti suite.
Kwapera vhiki, kambani yakaburitsa yekutanga beta vhezheni yeinotevera huru SteamOS yekuvandudza iyo yakaunza iyo iyo Linux Kernel 4.16 neiyo nyowani Display Kore (DC) fomati inogoneswa nekukasira kwematsva AMD Radeon mifananidzo makadhi pre-vega mune iyo AMDGPU giraidhi mutyairi.
SteamOS 2.164 beta yakafambisawo Mesa mifananidzo suite kune vhezheni 18.1.5 uye muridzi weNvidia mutyairi wekushandura 396.45 kune vese avo vane SteamOS nemakadhi akazvipira ekambani.
Chii chitsva muSteamOS 2.166
Nhasi, vhezheni itsva yeSteam (ine nhamba yekuvaka 2.166) yaona mwenje uye gadziridza Mesa mifananidzo suite kune vhezheni 18.1.6 ine zvakawanda zvinogadziriswa zveWayland, GLX uye DRI3 matekinoroji, pamwe neRADV, VC4, SWR, Etnaviv, r600, Radeon, Nouveau uye Intel i965 vatongi vemifananidzo.
SteamOS 2.166 futi gadziridza vatyairi veNvidia vane chekuita neshanduro 396.54 iyo inovandudza mashandiro anosvika kusvika makumi maviri muzana nekugadzirisa nyaya yesosi yakauya mune 20 dzakateedzana paLinux, FreeBSD, uye Solaris. Iyi vhezheni zvakare gadzirisa bug ne login uko bhatani repamba raigona kuita chando muBig Picture mode pasi pemamwe mamiriro.
Chekupedzisira, iyi beta vhezheni inounza ese ekuchengetedza ekuvandudzwa ayo azvino vhezheni yeDebian agamuchira.
Kana iwe uchida kurodha pasi SteamOS 2.166 unogona kuzviita kubva ku peji yepamutemoRangarira kuti iyi pre-yakaburitswa vhezheni, saka zviri nani kuti usashandise iyo uchitsvaga yakagadzikana mutambo wekutamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo yazvino beta yeSteamOS Linux inosvika neMesa 18.1.6 uye Nvidia 396.54